Jonga iDokotela kwiNtshukumo
Ukuba ungumtshatsheli we " Dkt Phil Phil ," siye safumana unyango kuwe. Unokufumana ithikithi yamahhala ukuya kwikhompyutheni kumntu kwaye ube ilungu labaphulaphuli abahlala kwi-Hollywood.
Ukufumana amathikithi "I-Dr Phil Show" inokuba yinto enzima kakhulu kuyo yonke imixholo eyaziwayo. Oku kungenxa yokuba umboniso odlawayo odla ngokukhawuleza ukukhishwa kwangoko. Kwakhona, bavula amathikithi ezimbalwa kwiiveki ezimbalwa ngexesha.
Ukuba ufuna ngokwenene ukubona uDkt. Phil ngomntu, kufuneka ucebe phambili kwaye ucele amathikithi akho emva nje kokuba enze izivakalisi. Nangona kunjalo, iinzame zakho ziya kuhlawula ngenxa yokuba ufikelele kubaphulaphuli ukuba ubabini emva kokubuyela emva kubonisa ngexesha elifanayo!
Unokufumana njani iiTikiti kwi-"Doctor Phil Show"
Kulula kakhulu ukwenza ukubhukelwa kweekitikiti zamahhala "kwiDkt. Phil Show." Unokucela ukuya kweettikiti ezine kwi-intanethi okanye kwifowuni kwaye umququzeleli wabaphulaphuli uya kuba neenkcukacha zokuqinisekisa amathikithi akho.
Njengoko uninzi lwentetho, ithikithi ayiqinisekisi ukuba uya kuhlala kubaphulaphuli. Bavame ukunikela amathikithi amaninzi kunezihlalo zokuqinisekisa ukuba abaphulaphuli bahlala bezele. Ukwamkelwa kuqala-kuza, kuqala-ke, qiniseka ukuba ubonise kusasa.
Myalelo we-Intanethi kwiphepha labaphulaphuli likaDkt Phil.
Shayela umgca wokubhuka wamahora-24 kwi-323-461-7445. Shiya igama lakho, iinombolo zefowuni nakusihlwa, kunye nenani leendwendwe ezihambayo (ukuya kutsho ezine).
"I-Dr. Phil Show" ifakwe kwiParamount Studios eLos Angeles, eCalifornia. Le ngenye yeentetho ezininzi ezibonisa ukuba ungabona kwindawo ye-LA.
Umboniso ngokuqhelekileyo iteksi ngoMsombuluko, ngoLwesibili, nangolwesithathu. Ixesha lokufika li-8 ekuseni, nangona uya kufuna ukufika kusasa ukuzama ukukhusela indawo kwindawo. Yilungiselele ukuhamba ngethungelwano lokukhusela.
Uyacelwa ukuba uhlale ixesha lokubamba imiqondiso emibini. Kucinganiselwa ukuba lo mboniso uza kugqiba nge-1: 30 ntambama
Imiboniso yamathoni ukusuka ngo-Agasti ukuya ekuqaleni kukaDisemba, kwaye ngoJanuwari ukuya kuMeyi, ngaphandle kweeholide. Imiboniso ehleliweyo inokukhanselwa okanye ishintshwe naliphi na ixesha.
Amalungu abaphulaphuli kufuneka abe ubuncinane ubuneminyaka eli-16 ubudala. Nabani ngaphantsi kwe-18 kufuneka abe nomzali nomgcini wezomthetho kwaye wonke umntu kufuneka ukuba abonise i-ID yesithombe.
Izambatho zoshishino zifunwa kwaye wonke umntu kufuneka abe "ikhamera ilungile." Lo mboniso ukhetha umnyama, imibala eqinile kwaye ukhetha ukuba awugqoki iipatheni, imhlophe, okanye iingubo ze-beige. Kunokubanda kakhulu kwi-studio, ngoko ugqoke ukufudumala.
"UDkt. Phil Show" uhlala kunomntu onokukhubazeka. I studio ifikeleleke kwaye banokukhetha okufana nezixhobo zokuphulaphula ezikhoyo. Bacela ukuba udibanise umququzeleli wabaphulaphuli ngaphambi kokutyelela ukuqinisekisa ukuba kwenziwe amalungiselelo.
Ayikho ikhamera, abarekhoda, iifowuni, ii-pagers, iincwadi, ukutya, njl njl. Ziya kuvunyelwa kwi studio.
UDkt Phil ungumdumo okhulu, kodwa akukho nxaxheba ngexesha lokubamba umboniso ukuba asayine i-autographs okanye athathe imifanekiso. Bacela ukuba ushiye iincwadi zakho zeDkt Phil kunye naziphi na amanqaku okanye izipho zakhe ekhaya.